Fitsarana misahana ny kolikoly-PAC Raharaha 70 no hotsaraina amin’ity taona ity
Nisy ny fahatarany teo amin’ireo antontan-taratasy tokony hotsaraina, araka ny fanazavana voaray, noho ny antony tamin’ny fifidianana ireo mpikambana tao amin’ny “Pôle Anti-Corruption” na ny PAC,
Fadin-tseranana Hanakaiky ny mpanjifa amin’ny laharana maitso
Ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa dia nampahafantatra ny fisian’ny laharana maitso « 360 » ny eo anivon’ny fadin-tseranana Malagasy omaly tetsy Tsaralalàna.
Tamin’ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, dia efa tsy nampiasa an’io toerana io intsony ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, fa nanangana foiben-toerana azy manokana teny Andraharo. Somary efa nizara roa ihany koa ny ekipa tamin’io fotoana io, ankoatra ireo namadika palitao. Ankehitriny ny HVM, dia tsy re tsaika intsony satria na amin’ny fifidianana depiote aza tsy misy mitondra ny lokon’io antoko io. Na izany aza, dia misy amin’ireo misafidy ny handeha amin’ny anaran’ny tenany manokana na amina anarana fikambanana vao natsangana no mbola ao anatin’ny HVM, ka paikady politika mihitsy no mety ho anton’izay. Tompon’andraikitra ambony tamin’ny andron-dRajaonarimampianina, toy ny minisitra maromaro no nirotsaka hofidiana depiote, tahaka an-dry Marie Monique Rasoazananera any Ambositra, Mamy Lalatiana Andriamanarivo any Faratsiho, Beboarimisa Ralava any Manakara,… Ho hita eo ny tohiny aorian’ny fifidianana na hamondron-kery izy ireo raha lany satria politika no atao.